Galitaanka Ciidamada Kenya ee Soomaaliya wuxuu sare u qaaday heeganka looga jiro weerar argagixiso oo gudaha ka dhaca - Sabahionline.com
Galitaanka Ciidamada Kenya ee Soomaaliya wuxuu sare u qaaday heeganka looga jiro weerar argagixiso oo gudaha ka dhaca
Warbixintan waxa wax ka qoray Cikku Kimani oo Nayroobi joogta
Jannaayo 19, 2012
Iyadoo uu Hawlgalka millatariga Keyna ay galeen saddexaad, ayay Ciidamada Difaaca ee Kenya waxa u suura-galay in ay gudaha ugu sii durkaan Soomaaliya, dagaalkooda ay kula jiraan kooxda al-Shabaab. Iyada oo cawaaqibka ololuhu uu dadka reer Kenya qaarkood ku abuuray walwal ku saabsan ammaanka dalka, ayaa haddana sahan dhawaan lagu eegay ra'yiga dadka waxa uu muujinayaa in dadka intiisa badani ay taageersan yihiin hawlgalka milatari. Bilays ilaalinaya goob bamka gacanta lagu tuuray oo ku taala Nayroobi bishii Oktoobar 24-keedii, kaasi oo dilay hal qof 29 kalena dhaawacay. Masuuliyiintu waxay weerarka la xiriiriyeen al-Shabaab. [Simon Maina/AFP] Qodobbo la xiriira
Kenya oo al-Shabaab ku eedeysay
weerarradii dhacay dhamaadkii toddobaadka
Raysal wasaaraha Somaaiya oo saraakiisha Kenya kala hadlay ololaha ka soo horjeeda al-Shabaab
Ra’yi ururinta, oo uu qaaday Macadka Horumarinta Waxbarashada ee Jaamacada Nayroobi mudadii u dhaxaysay bishii Noofambar 4-teedii iyo Diisambar 5-teedii, ayaa tilmaantay in 82% (boqolkiiba) dadka Kenya ay taageereen hawlgalka. Ninka madaxda u ah dadka sameeyay baaritaankan Winnie Mitula ayaa sheegtay in ra’yi ururinta su’aalo lagu waydiiyay 2,400 oo ah dadka degaanka ku nool ee codka bixin kara oo ka kala socday 44 ka mid ah 47 degmo ee ay Kenya ka kooban tahay. Degmooyinka Laamu, Siyeelow iyo Mandheera kuma ay jirin ra’yi ururinta Sababa la xiriira dhinaca ammaanka. Ra’yi ururintu waxaa lagu ogaaday in 11% dadka reer Kenya ay dareemayaan in dawladdu ay hawlgalka millatari ay si xun u maareeyeen, halka 7% ayan ka war hayn in ciidamada Kenya ay dagaal la galeen al-Shabaab.
Mid ka mid ah cilmi baarayaasha, Joshua Kivuvi, ayaa sheegay in taageerada wayn ee loo hayo Hawgalka Linda Nichi ay sabab u tahay xaaladaha sida uu u soo hagaagay ammaanka Kenya tan iyo wixii ka dambeeyay bishii Novermber. "Marka laga reebo labadii weerar ee ugu horaysay ee Nairobi ka dhacday wax yar ka dib billowgii dagaalka, wax weerar ihi kama aanay dhicin Nairobi waxaanay nala tahay in ay tani keentay in hawsha aad loo taageero,” ayuu yiri Joshua, sida ay sheegtay Jariidada Daily Nation ee Kenya. Maamulka degaanka ayaa kordhiyay heeganka ammaanka ka dib markii marar badan weerar bamka gacanta ah iyo afduubyo ay gaysteen dagaal yahano looga shakiyay inay al-Shabaab ka tirsan yihiin, halka dhawr ka mid ah safaaradaha dawlada dibada ayaa uga digay muwaadiniintooda weerar la qorsheeyay oo ka dhaci kara dalka Kiiniya. Dagaal lagula jiro al-Shabaab, maaha mid Soomaaliya ku jeeda
Markii Kenya ay ku dhawaaqday go’aankeeda ay ku galayso Soomaaliya bishii Oktoobar 2011-kii, masuuliyiintu waxay isku dayeen inay si fiican u cadeeyaan in dawladda Kenya ay u qasdiday al-Shabaabta ku sugan Soomaaliya, ee ayan dagaal la galaynin Soomaaliya.
"jiritaanka dalkayaga ayaa halis la galiyay iyada oo ay jiraan hanjabaado weeraro argagixiso oo khatar ah," Wasiirka Arimaha Gudaha ee Kenya George Saitoti ayaa shir jiraa’id ugu sheegay wariyayaasha bishii Oktoobar 15-keedii. "Tani macnaheedu waa inaan hada dabagalayno cadawga, kuwaasi oo ah al-Shabaab, meelkasta oo ay joogaan, xataa haddii ay ku sugan yihiin dalkooda. " Wasiirka Difaaca ee dalka Kenya Yuusuf Xaaji ayaa isla shirka jiraa’id, isagana ku yiri "Haddii uu cadaw ku soo weeraro, waxaa laguu ogol yahay inaad dabagasho cadawga ilaa aadka qabanayso. Waxaan ku khasbi doonaa inaan geeyno meelka fog xadka." Dagaal yahanada al-Shabaab waxay dagaal kula jireen Dawlada Federaalka Ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ilaa 2009-kii. Maalmihii ugu dambeeyayna, waxay kordhinayeen hawlgaladooda gobolka, iyada oo ay dadku qaar qabaan in ay tallaabadaas ku taageerayso al-Qaacida. Galitaanka Kenya ee Soomaaliya waxaa sababay dhawr afduub oo lala xiriiriyay dagaal yahanda al-Shabaab kuwaas oo ka dhacay gudada Kenya. Tusaale ahaan, afdbuukii 13-kii Oktober ay al-Shabaab kula kacday laba haween oo u dhashay dalka Spain kuwaa oo u shaqaynayay Dakhaatiirta aan Xuduudda lahayn ee xerada qoxootiga Dhadhaab ee Kiiniya, xeradaasi oo hoy u ah 300,000 oo qof oo ka soo qaxay dagaalka iyo gaajada ka dhacay Soomaaliya. Marie Dedieu, Haweenay naafo ah ee u dhalatay dalka Faransiiska oo ku noolayd xeebta Kenya, ayaa sidoo kale la afduubay bishii Oktoobar 1-deedii iyadoo sariirteeda saran. Waxay dhimatay iyadoo gacanta ugu jirta al-Shabaab iyagoo maydkeedana u haystay madaxfurasho ahaan. Bishii September, darawal u shaqaynayay haya’dda caalamiga ah ee CARE ayaa laga afduubay meel u dhow xerada qoxootiga ee Dhadhaab. Sidoo kale isla Bishaas September, dalxiise u dhashay dalka Ingiriiska David Tebbut ayaa la dilay iyadoo xaaskiisii, Judith na, la afduubay wakhti ay ku dalxiisayeen Kenya. . Ciidanka booliiska ayaa sidoo kale ku eedeeyay al-Shabaab weeraro bamka gacanta oo bar tilmaansanaya maqaaxiyaha caanka, huteelada iyo goobaha cawayska ee ku yaala Nayroobi iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka Kenya.
Dhacdadii ugu dambaysay, shan qof ayaa lagu dilay 21 kalena waa lagu dhaawacay Bilowgii Sanadkii Cusbaa weerar bamka gacanta ah oo lagu qaaday magaalada ku taal bariga Kenya ee Gaarisa. Booliisku waxay sheegeen in weerarka ay qaadeen kooxo ka tirsan al-Shabaab ama jihooyin iyaga taageersan. Al-Shabaab waxay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah dawladda Kenya
Marka ay Ciidamada Difaaca ee Kenya ay hore ugu sii socdaan Soomaaliya si ay al-Shabaab uga sifeeyaan koonfurta, isla markaana ay si rasmi ah ugu biireen ciidamada AMISOM, kooxda al-Shabaab waxay dhinaceeda biloowday weeraro ay ku hayso ciidamada Kenya ee ku jira gudaha Soomaaliya isla markaana waxa ay ku dhaaratay in ay Nairobina weerari doonto. Maalmo yar ka dib sanadkii cusbaa, Sheekh Axmad Iimaan Cali, oo isku magaacabay hogaamiyaha dagaal yahanada al-Shabaab ee ka soo jeeda Kiiniya kuna sugan Soomaaliya, ayaa ku dhawaaqay dagaal jihaad ah oo ka dhan ah Kenya taasoo ay jawaab u ah weerarka millatari ee Kenya.
"Haddii aad awoodi waydo inaad gaarto dhulka jihaadka … markaa seeftaada ka hor gee cadawga kuugu dhow, " ayuu Cali cajalad fiidiyoo ah ku sheegay bishii January 6-deedii, cajaladdaas oo ay soo saartay al-Kataib, oo ah waaxda warfaafinta ee al –Shabaab. "Waa in hadda jihaad laga oogaa Kenya dhexdaada, taasi oo sharci ahaan ah goob dagaal." "Maaha inaad ogolaansho ka haysato waalidiintiina," ayuu intaasi ku daray. Cali, oo ah muwaadin Kenya ah isla markaana ahaan jiray maamulaha Xarunta Dhalinyarada Islaamka ee degaanka Pumwani ee Nayroobi, ayaa la sheegay inuu yahay qofka xuddunta u ah ee maamulaya hawlaha qoritaanka dadka aan Soomaalida u dhalan ee ka socda Nairobi sifo ay ugu biiraan al-Shabaab. Warbixin soo baxday bishii July, ayay Qaramada Midoobay ku sheegtay in Xarunta Dhalinyarada Islaamku ay ka qaybqaadatay qoritaanka, lacag ururinta, iyo samaynta tababar iyo hawlo baraarujineed ee loogu talo galay al-Shabaab. Xarunta Dhalinyarada Islaamku, oo ah mid xiriir la leh al-Qaeda iyo al-Shabaab, ayaa 11-kii January Cali u magacoowday " amiirka sare ee Kenya" iyagoo ku dhaartay in ay weeraro dheeraada oo uu hogaaminayo Cali ka fulinayaan gudaha Kenya. Maalintii taasi xigtay, al-Shabaab waxay weerareen xarun booliis oo ku taalay Guerille oo ku taalay dhinaca waqooyi bari ee dagmada Wajeer ee dalka Kenya, iyagoo dilay todoba qof, kuwaasi oo ay ki jireen sadex ciimadamada booliiska ka tirsanaa. Booliiska ayaa sheegay in ay dagaal yahannada ay afduubeen saddex ka tirsan maamulayaasha dawladda ee degaanka ayna xadeen hub iyo gaari ay dawladdu lahayd. Bisha Janaayo 13-keedii, dagaal yahannadu waxay laba qof oo u dhashay Kenya oo ay soo afduubeen ku soo bandhigeen jidadka Baardheera ee gobolkaa Gedo ee koonfurta Soomaaliya iyagoo ku dhawaaqayay, "Ilaahay ayaa wayn", sida ay sheegeen dad goob-joog ah. Hal todobaad ka dib afduubka, xafiiska warfaafinta al-Shabaab ayaa warbaahinta bulshada ku soo daacabay sawirada dadka afduubka loo haysto iyo sida weerarku u dhacay sida uu sheegay qof ka tirsan dadka la afduubay. Dadka Kenya waxay walwal ka qabaan weerarada al-Shabaab Qaar ka tirsan muwaadiniinta Kenya ayaa sheegaya in ay dareemeen saamaynta ammaanka heeganka la galiyay iyo hanjabaadda weeraro argaxiso. "Waxan jeclahay inaan banaanka aado oo wakhti fiican qaato, laakiin hadda sidii hore uma nafisi karo, " Samuel Mbugua, oo ah nin ganacsade ah oo Nairobi ku sugan, ayaa sidaasi u sheegay Sabahi. "Haddayba mar bam gacmeed ku tuureen baararka lagu caweeyo, mar labaad haddana way samayn karaan taasi."
Irene Nyambura, waa hooyo guri joogta ah oo haysata hal ilmo ah, waxayna daggantahay Nairobi, ayaa sheegtay in daawashada wararku galiyaan walwal iyo murugo. "Sadex bilood kaliya ayaa laga joogaa wakhtigii dawladdu bilowday dabagalka al-Shabaab ee Soomaaliya, laakiin waxaa la moodaa sidii wax waligeed socday oo kale, " ayay u sheegtay Sabahi. "Waan murugoodaa marka gabartaydu aaddo dugsiga sababtoo ah ma garan kartid halka ay al-Shabaab ku dhufanayso marka xiga," ayay sheegtay.
Titus Maloi, oo maamusha shirkad dalxiiska oo Nayroobi ku taala, ayaa sheegay, inuu walwal dhinaca ganacsiga ah qabo haddii uu ammaanku sii xumaado, "Markii ugu horeysay ee weerarku ka dhacay dhinaca xeebta, waxaan jiray dad la baajiyay. Hada waxaa jira hoos u dhac wayn oo ku yimid dadkii isku diiwaan-galin jiray dalxiiska iyadoo ay soo dhacayaan email-yo badan oo dalbanaya damaanad-qaad dhinaca ammaanka ah in aan siinno," ayuu yiri. "Laakiin sidee baad u damaanad qaadi kartaa ammaankooda marka aanan xataa damaanad qaadi karin amaankayaga? wuxuu noqonayaa sanad adag marka la eego dhinaca dalxiiska." Wasiirka Dalxiiska ee Kenya Najib Balala ayaa yareeyay saamaynta uu hawlgalka milatari ee Kenya-- iyo aargoosiga al-Shabaab -- uu ku yeelan karo dhinaca dalxiiska. "Jawaabta milatarigu siinayo al-Shabaab saamayn mayso dhaqdhaqaaqyada dalxiiska ee dalka, " ayauu Balala sheegay, isagoo intaasi ku daraya in hawlaha amaanka lagu ilaalinayaa ay diyaar yihiin si loo ilaaliyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada dalxiiska. Afhayeenka ciidanka booliiska Eric Kiraithe ayaa u sheegay Sahabi in shakhsiyaad dhinaca ammaanka ah oo galaya meelaha bulshadu iskugu timaado ay gacan ka gaysanayso in amaanka hagaago. "Ujeedada joogitaanka shakhsiyaadka ka socda dhinaca ammaanka waxay al-Shabaab u diidaysaa fursadaha waxayna yaraynaysaa wixii fursado ah ee u heli karaan taasi. Markaad og tahay in lagu baarayo inta aadan dhismaha galin ka hor, lagama yaaboo inaad wax qaraxyo ah qaadato," ayuu yiri. Kiraithe wuxuu muwaadiniinta ugu baaqday inay foojignaadaan ayna ciidanka booliiska ka caawiyaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen al-Shabaab. Wuxuu sheegay in ciidanka booliisku ay sameeyay dhowr qabqabasho kuwaasi oo lala xiriiriyay weerarada, ayna ku jireen dad looga shakiyay in ay hayaan macluumaad muhiima oo ku saabsan hawlgallada al-Shabaab. "Fariinta aan rabno inaan u dirno dadka Kenya iyo kuwa aan ahaynba waxa weeye: Ha baqina, taxaddarna sameeya, " ayuu yiri.